U-Soy de Mac uphakathi kwiqela le-Intanethi le-AB ukusukela ngo-2008 ekwabelwana ngalo kunye nabo bonke abafundi balo iindaba, izifundo, amaqhinga nayo yonke ingcaciso ekhoyo ngoku malunga netekhnoloji ngokubanzi kunye neMac ngokukodwa.
KwaSoy de Mac sicacile ukuba eyona nto ibalulekileyo kukwabelana ngolwazi oluninzi kangangoko malunga nento enomdla kubo bonke abo basindwendwelayo kwaye abafuna okanye abafuna ulwazi oluneenkcukacha kwiimveliso okanye isoftware enxulumene neApple neMac. Uluntu olusebenzisayo luyaqhubeka nokukhula imihla ngemihla kwaye namhlanje sinokuthi siphakathi kwezona ndaba zinempembelelo kwiiMacs nakwiApple ngokubanzi.
El Iqela lokuhlela likaSoy de Mac Yenziwe ngababhali abalandelayo:
Ukuba ufuna nokuba yinxalenye yeqela lokubhala likaSoy de Mac, gcwalisa le fomu.
Umququzeleli eSoy de Mac ukusukela ngo-2013 kwaye onwabele iimveliso ze-Apple ngawo onke amandla abo kunye nobuthathaka babo. Ukusukela ngo-2012 xa iMac yokuqala yafika ebomini bam, andikaze ndizonwabele kakhulu kwiikhompyuter ngaphambili. Xa ndandisemncinci ndandisebenzisa ii-Amstrads kunye ne-Comodore Amiga ukudlala kunye nokucoca, ngoko amava kunye neekhomputha kunye ne-elektroniki yinto esegazini lam. Amava afunyenwe kwezi khompyuter kwiminyaka edlulileyo kuthetha ukuba namhlanje ndingabelana ngobulumko bam nabanye abasebenzisi, kwaye oko kundigcina ndifunda rhoqo. Uya kundifumana kwi-Twitter njengo @jordi_sdmac
Kwakungekho phakathi kwe-2000s apho ndiqale ukungena kwi-Mac ecosystem kunye neMacBook emhlophe endisenayo. Ngoku ndisebenzisa iMac Mini ukusukela ngo-2018. Ndineminyaka engaphezu kweshumi yamava ngale nkqubo yokusebenza, kwaye ndiyathanda ukwabelana ngolwazi endilufumene enkosi kwizifundo zam nangendlela endizifundise ngayo.
Umlandeli wetekhnoloji ngokubanzi kunye nendalo iphela ye-Apple. Ndicinga ukuba iiMacBook Pros zezona zixhobo zibalaseleyo kwiapile. Ukusebenziseka ngokulula kwe-macOS kukunika amandla okuzama izinto ezintsha ngaphandle kokuphambana. Ibha yokuChukumisa kufuneka inyanzelwe kuzo zonke iikhompyuter.
Ukugxilwa kwindalo yonke eyenziwe nguMsebenzi kunye noWoz, okoko iApple Watch yam yasindisa ubomi bam. Ndiyakonwabela ukusebenzisa iMac yam yonke imihla, nokuba yeyomsebenzi okanye yolonwabo. IMacOS yenza kube lula kuwe.
I-Bachelor yoNyango kunye noGqirha wabantwana ngokubiza. Ukuthanda itekhnoloji, ngakumbi iimveliso zika-Apple, ndikonwabele ukuba ngumhleli we "Iindaba ze-iPhone" kwaye "ndivela eMac" Ubambeke kolu ngcelele kwinguqulelo yoqobo. I-Podcaster ene-iPhone eyiyo kunye ne-miPodcast.
Umthandi wetekhnoloji, ngakumbi iimveliso zeApple. Ndifunda nge-macbook, kwaye okwangoku iMac yinkqubo yokusebenza ehamba nam yonke imihla, kokubini kuqeqesho lwam kunye nexesha lokuzonwabisa.
Uyaphambana ngetekhnoloji, ezemidlalo kunye nokufota. Njengabaninzi, iApple yabutshintsha ubomi bethu. Kwaye ndithatha i-mac yam naphina. Ndiyakuthanda ukuba semgangathweni ngayo yonke into, kwaye ndiyathemba ukuba iyakunceda uyonwabele le nkqubo njengoko ndenzayo.
UMiguel Angel Juncos
Itekhnoloji ye-microcomputer okokoko ndaqala, ndiyayithanda itekhnoloji ngokubanzi kunye neApple kunye neemveliso zayo ngokukodwa, endinomdla kuzo nguMac.Ndonwabela ukusebenza kunye nexesha elininzi lokuzonwabisa kunye nelaptop yam.
Ndiyazithanda iimveliso zeApple, njengezigidi zabanye abantu. IMac yinxalenye yobomi bam bemihla ngemihla kwaye ndizama ukuyizisa kowakho.
UYesu Arjona Montalvo
Umphuhlisi kwiinkqubo ze-iOS kunye ne-IT, okwangoku kugxilwe ekufundeni nasekuzibhaliseni mihla le malunga nenkqubo yokusebenza kweApple. Ndiphanda yonke into enxulumene neMac kwaye ndabelana ngayo kwiindaba eziza kukugcina unolwazi.
Injineli ye-elektroniki iyalithanda ilizwe le-Apple kwaye ngakumbi malunga neMac, yabo babheja kwizinto ezintsha nakwitekhnoloji njengendlela yokuphucula imeko-bume yethu. Umlutha ukuba ungaze ulahle kwaye ufunde umzuzu ngamnye. Ndiyathemba ke ukuba yonke into endiyibhalayo iluncedo kuwe.
Ndihlala ndinomdla wokufunda, ndiyayithanda yonke into enxulumene netekhnoloji entsha kunye nokunxibelelana kwabo necandelo lezemfundo kunye nemfundo. Ndiyayithanda iMac, apho ndihlala ndifunda khona, kwaye ndihlala ndithetha ukuze abanye abantu bonwabele le nkqubo yokusebenza.
Ndinomdla kwitekhnoloji ngokubanzi, ngakumbi malunga nelizwe leMac.Kwixesha lam lasimahla, ndiyazinikela ekulawuleni ezinye iiprojekthi, ndihlala ndikunye neMac yam, endifunda kuyo yonke imihla. Ukuba ufuna ukwazi iinkcukacha kunye nokulunga kwale nkqubo yokusebenza, ndiyathemba ukuba uyawathanda amanqaku am.
Ukubhala kunye netekhnoloji zizinto ezimbini endizithandayo. Kwaye ukusukela ngo-2005 ndinethamsanqa lokudibanisa ukusebenzisana kumajelo eendaba akhethekileyo kwicandelo, ndisebenzisa iMacbook. Eyona intle konke? Ndiyaqhubeka nokonwabela njengosuku lokuqala ndithetha ngayo nayiphi na inkqubo abayikhuphelayo le nkqubo yokusebenza.
Molo apho! Ndisakhumbula xa ndafumana iMac yam yokuqala, iMacBook Pro yakudala yokuba ngaphandle kokuba indala kunePC yam ngelo xesha wayinika iwaka lokujika. Ukusukela ngala mini bekungekho kubuya mva ... Kuyinyani ukuba ndiyaqhubeka nee-PC ngezizathu zomsebenzi kodwa ndiyathanda ukusebenzisa iMac yam "ukunqamula" kwaye ndisebenze kwiiprojekthi zam zobuqu.